Olee otú m tọgharịa m Iomega mpụga ike mbanye? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Nchọpụta nsogbu Iomega ego - mkpebi ndị dị irè
Nchọpụta nsogbu Iomega ego - mkpebi ndị dị irè
Olee otú m tọgharịa m Iomega mpụga ike mbanye?
Mụbawanye na ngosi ebe na taskbar wee pịa abụọ naNchekwa IomegaIhe ngosi njikwa.
Pịa gia akara imeghe Home Media NetworkIke mbanyeNjikwa.
Họrọ 'Sistemụ' n'aka ekpe wee pịa 'orylọ ọrụTọgharia.
Kedụ ka m ga - esi edozi Iomega mpụga ike m?
Wzọ 9Idozi Iomega Mpụga Mpụga Mpụgaadighi egosi na Mac
Lelee ma ọ bụrụ naIomega Mpụga Mpụga MpụgaA na-etinye Dozie. ...
Ndabere data USB. ...
NaUSBma ọ bụ Flash.GbọalaEmebiri Port. ...
Malitegharịa ekwentị gị Mac. ...
Ezighi ezi nke edeziriIomega Mpụga Mpụga Mpụga. ...
Emeghị ka Mac iji gosipụta iheMpụga Mpụgan’elu Desktọpụ.
Kedu ka m ga - esi mepee Iomega eGo m?
Can nwere ike nweta obere waya nke dị gịrịgịrị ma dọghee ya n'okpuru egbugbere ọnụ a na obere oghere dị na ya. Wee were onye na-anya ịghasa wee gbapụta ihe mkpuchi ya. Enwetara m nke m meghere na enweghị mmebi ọ bụla na nke a. Ozugbo ọ bụimeghemgbe ahụ ị ụdị nwere i pryomi si HDD na ya na akara kaadị ga-abịa na ya.29 Ọkt 2010
Hey ụmụ okorobịa, ọ kpachaara anya na-ebupụ egbe egbe Iomega, ị ji eriri ojii ma ọ bụ draịvụ siri ike na-aga, ọ bụ nsụgharị 500 gigabyte ma nwee oke ọdịda ọdịda, ị nwere ike ịda site na 2 mita ma ọ bụ ọla niile, ọ dị ezigbo mma Hugo nwere eriri ojii na ya mana mmanụ a honeyụ oh gigabyte ọ bụ naanị aUSB ka ị wee nwee ike ịpinye ya na ntaneti echere m na nke a na-agba ọsọ ọhụrụ dị ike nke mere na ọ mara ezigbo mma ọ dị ka nnukwu flash Drive na-ebepụ mac n'efu na nyocha nje gbakwunyere pc gị, mana nke ahụ na-arụ ọrụ maka pc na mac gị, yabụ aga m enyocha ọkara a siri ike ịla azụ na windo m ka m nwee ike iji capsules oge na mac m naanị ihe m ga - eji kwado ngwa na egwu na windo windo windo ụfọdụ, m ga-adọpụ ntakịrị ma ọ ga-edozi nkwụsịtụ m zụtara n'ụlọ ahịa maka 6ol draịva siri ike ma adị m mma mgbe Krismas gachara, ọ ga - enyere aka mepee ya mana m nọ na mwube ụlọ m ma na-ekwu okwu banyere oke ọkwa m, yabụ lee ihe a, anyị na draịvụ ike anyị nwere USB sti ck gịnị bụ ihe a na ọ bụghị? mara na ahụtụbeghị m ya mere na m ga-agụ ya n'ụzọ ụfọdụ iji hụ na uwe nchekwa nke mkpara m anaghị enweta nje ọ bụla nke ụmụ okorobịa na-adịghị mma na akụkọ ntolite, n'ihi ya, ọ na-adọta ike ya na ụmụ okorobịa ahụ. draịvụ ike na akụkọ Macbook m Proonly nwere ọdụ ụgbọ USB abụọ ọ bụ ezie na anaghị m eji eriri USB m, ọ dị mma, enwere m ike ijikwa ya n'ihi na m na-eji ihe nkwụnye ọkụ, ọ bụ ọla, ọ mara mma, ụmụ okorobịa ojii belt belt ebe a. nke ahụ bụ ego ebe a ka ị ghara ịga nwute IOmega, enwere ihe Cyril ị nwere ihe ngosi ọkụ na-acha ọkụ ọkụ USB mara mma obere Lee ebe a, ọ bụ ah na-atụnyere Apple Otu na njikwa ntanetị, yabụ ọ dị ntakịrị karịa, ma ọ bụ mechie Anyị mymacbook pro the EO na anyị ga-etinye mini usb n'ime ọdụ ụgbọ mmiri mini ebe ahụ anyị nwetara ya Achọrọ m ijikọ eriri abụọ a nke a ejighị oghere iji kwụọ ụgwọ ị makwa na ị na-etinye ya n'ime ebubo Machias na m MacBook Pro mgbe ọ na - agbapụta - ihe kwesiri igosipụta na onye siri ike m chere na kọmputa na - ekwu wantchọrọ iji IOmega H DD - igwe nchekwa oge adịghị n'ebe ahụ mana anyị nwere I omega I cons right ebe a okpukpu abụọ ebe ahụ ị na-enye oriri nke bytes gị maka oge ise, yabụ ebe ị gara, ị nwere ntọala igbe dị mfe plọg ma gaa ị ga - enweta espys enweghị ikike nke ụmụ okorobịa na - ekele maka ikiri Biko jiri ọnụego kwenye ikwu
Gịnị bụ Iomega eGo?
Kasị mara mma-na-achọ USB 3.0 mbanye anyị na-anwale, naIomega eGonwere ihe nkedo nke roba nke gbara ya gburugburu, draịva ahụ na-acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, ma ọ bụ ọlaọcha. ... Na 14.4 ounces, ndịegoỌ fọrọ nke nta ka okpukpu abụọ dị ka draịva USB 3.0 ndị ọzọ. Ọ bụkwa nke kachasị ukwuu, na-atụle ihe karịrị 5 sentimita n'ogologo.12 nwere ike 2011
Esi edozi nsogbu Iomega mpụga ike mbanye?
Nchọpụta nsogbu Iomega Mpụga Mpụga Iomega 1 Lelee ike ya na draịvụ ike mpụga Iomega. ... 2 Lelee USB data USB na-agba ọsọ site na Iomega mbanye na kọmputa. ... 3 Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa gị site na CD ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala (ọ bịara na draịvụ Iomega). Ihe ndị ọzọ ...
Enwere ike iji ego Iomega na sistemụ ndị ọzọ arụ ọrụ?
IHE: Ọ bụrụ na ịchọrọ iji draịva na sistemụ ndị ọzọ arụ ọrụ, jiri Iomega FAT32 Formatter gbanwee usoro ka ọ bụrụ FAT32. Akụrụngwa na ntuziaka ndị ahụ sitere na mpaghara nkwado na www.iomega.com. Ne connectez PAS nwere ike idobe eriri USB et FireWire en même temps.
Kedụ ka m ga - esi zọpụta paswọọdụ m n’Iomega?
Ikwesiri igba ọsọ na onye na-ahụ nsogbu ma see bọtịnụ ule na ọkwa ọ bụla tupu ịhọrọ ọzọ. Na nke abụọ nke nchọpụta nsogbu, Iomega ihuenyo ikwe ka ezoro ezo paswọọdụ ga-egosi na ndabere, ya mere, mgbe na-eti na-esote, họrọ nhọrọ ịzọpụta ndakọrịta ntọala dị ka ya ugbu a na-arụ ọrụ. Ugbu a megharịa ma nwee ọ !ụ!
Bụ eGo obere draịvụ ike dakọtara na Time Machine?
Ndakọrịta Oge Igwe Ego Portable Hard Drive n'ụdị HFS + na dakọtara na Time Machine (dị na Mac OS X ụdị 10.5). Mathazi Drive maka Windows ịkpachara anya! Imezigharị ụgbọala ahụ ga-ehichapụ data niile dị ugbu a!